Merapi, oo ah mid ka mid ah Folkaanaha ugu firfircoon Indonesia, ayaa dirxiya dirxiga, sida uu sheegayo Jucelino Luz – JucelinoLuz
Merapi, oo ah mid ka mid ah Folkaanaha ugu firfircoon Indonesia, ayaa dirxiya dirxiga, sida uu sheegayo Jucelino Luz
Águas de Lindóia, Ogosto 12, 2021
Waxay ku taallaa jasiiradda Java, waxay qarxi doontaa Ogosto 16, 2021, oo daruur dambas ah ayaa dabooli doonta hareeraha godadka.
Merapi ayaa diiwaangelisay waxqabad xooggan bilihii la soo dhaafay waxayna mas’uuliyiintu sare u qaadeen heerka feejignaanta dhammaadkii sannadkii hore.
Sida laga soo xigtay tilmaamaha, habku wuxuu noqon karaa mid khatar ah oo qofna waa inuusan u dhowaan shan kiiloomitir fokaanaha. Deganeyaashu waa inay iska ilaaliyaan dambaska iyo wabiyada lava ee suurtogalka ah ee ku xeeran Merapi.
Qaraxii ugu dambeeyay ee ugu weynaa ee foolkaanada ayaa dhacay sanadkii 2010, iyadoo isku dheelitirnaan 300 dhimasho ah iyo baxsad ku dhawaad ​​280,000 oo qof, taas oo uu sii saadaaliyay Jucelino Luz, warqado loo diray mas’uuliyiinta dalkaas.
Jasiiradaha Indooniisiya waxay leeyihiin ku dhawaad ​​130 Folkaano firfircoon, nasiib darro qaar badan oo ka mid ahi waxay soo geli doonaan dhaqdhaqaaqyo badan sababtuna tahay kulaylka caalamiga ah. Sidoo kale masiibada ugu daran ayaa ah quusitaanka iyo qabsashada biyaha Jakarta oo dhici karta ugu badnaan 45 sano, sidoo kale waxaan haysannaa dhibaatada dhul gariir weyn oo 9.0 ah oo ku dhici kara goobta Janaayo 16, 2026. waxoogaa dib u dhig …)
Waxaan u maleynayaa in mas’uuliyiintu ay qaadaan tallaabooyin lagu yareynayo dhibaatooyinka dadka aan waxba galabsan ee meeshaas ku sugan.
Indooniisiya waxay leedahay dad cajiib ah oo soo dhaweyn leh, had iyo jeer waan u ducaynnaa qof walba oo halkan jooga.
Haddii aadan weli garanayn Jucelino Luz shaqooyinka iyo shaqooyinka ruuxi ahaaneed, waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad iibsato mid ka mid ah buugaagtiisa oo lagu qoray dhawr luqadood. Guji xiriirka hoose oo dooro midka ugu fiican fahamkaaga waxsii sheegyada iyo faallooyinka. Raac oo waliba wadaag waxyaabaha ku jira. . Wuxuu malaayiin qof ugu adeegay barakooyinkiisa iyo la -talin ruuxi ah iyo mid firfircoon.
Professor Jucelino Luz – bay’adeed, dhaqdhaqaaqe, saamayn iyo hage ruuxi ah
ميراپي ، انڊونيشيا جي س فعال کان و volيڪ سرگرم cرندڙ جبلن مان هڪ آهي ، لاروا wsڪي ٿو ، شگون جي مطابق Jucelino Luz
Merapi, moja ya volkano inayotumika sana Indonesia, hutema mabuu, kulingana na ishara ya Jucelino Luz